Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM oo si buuxda ula wareegay Degmada Baraawe iyo Barakac socda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM oo si buuxda ula wareegay Degmada Baraawe iyo Barakac socda
War goor dhow nasoo gaaraya ayaa sheegaya in Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom ay goor dhow gudaha u galeen Magaalada dekada leh ee Baraawe oo Shabaab ay ku xooganayeen muddo shan sano ahna ay maamulayeen.
Wararku waxa ay sheegayaan in la arkaayo Ciidamada oo gaadiidka Dagaalka iyo kuwa raxan-raxan u socda kuwaasi oo dhex mushaaxaayo bartamaha Magaalada, iyagoona aan weli la kulmin wax iska hor imaad ah.
Gudaha Degmada ayaa la Tilmaamayaa inay galeen inkabadan 1,800 oo Ciidan ah, halka tiro intaa kasii badana ay ilaalo adag ka hayaan daafaha Magaalada oo ay suuragal tahay inay Alshabaab dib halkaasi uga soo galaan.
Sidoo kale, wararku waxa ay sheegayaan in Magaalada dadkii deganaa badankooda ay ka barakaceen, dadka ku haray Magaalada, ayaa sheegaayo inay arkayaan ciidamo badan oo Amisom iyo kuwa Dowladda isugu jira oo Magaalada si aad ah ugu qul-qulaayo.
Dhanka kale, wararka ayaa Tilmaamaya in ciidamada Huwanta ay difaacyo ka sameysteen ilaa saddex Koontarool oo banaanka Magaalada ah, si ay halkaasi isaga ilaaliyaan weeraro culus oo Xoogaga Shabaab ay ku soo qaadaan.